2004 အမေရိကန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ: Goosen Mickelson ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်
2004 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Goosen Outlasts Mickelson
Retief Goosen ခက်ခဲဂေါက်ကွင်းအခြေအနေများလုပ်ကြံ - နဲ့ Phil Mickelson - 2004 ခုနှစ်အနိုင်ရ အမေရိကန်ပွင့်လင်း ခြင်း, တောင်အာဖရိကဂေါက်သီးရဲ့ ဒီအဓိကချန်ပီယံဒုတိယအနိုင်ရရှိ။
ရက်စွဲများ: ဇွန်လ 17-20, 2004
တည်နေရာ: Shinnecock တောင်ကုန်းဂေါက်ကလပ် Shinnecock တောင်တန်းများ, New York မှာ
ပြိုင်ပွဲအရေအတွက်ကို: ဒီအမေရိကန်ကိုဖွင့်ကစားခဲ့ပါတယ်အမှတ် 104 အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘယ်လို Goosen 2004 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်မှာဒိုင်းဆုဆှဲ
Shinnecock တောင်ကုန်းဂေါက်ကလပ်မှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သင်တန်းအခြေအနေများအများအပြား 2004 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်အကြောင်းကိုသတိရဘာတွေလုပ်နေလဲ။
သူများသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအခြေအနေများကလပ်ကိုယ်တိုင်က၏အမှား, ဒါပေမယ့် testy အခြေအနေများများအတွက် USGA ရဲ့အလိုဆန္ဒ၏ပေါင်းစပ်မဟုတ်ကြ - အထူးသဖြင့်အလွန်နီးကပ်စွာ mown အစိမ်းရောင်နှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းအဘို့အ အစိမ်းရောင်အမြန်နှုန်း - တစ်တောင့်တင်းအလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့လေတိုက်အတူ။ နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်အသုံးပြုပုံဂရင်းအများအပြားအားဖွင့ ်. ၏အစွန်းပေါ်မှာထင်ရှား greenskeepers အုပ်စုများကစားအကြား In-အချို့သောအစိမ်းရောင်ရေလောင်းစတင်ခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်အခြေအနေ၏, သို့သော်, အားလုံးဂေါက်သီးတူညီသောသင်တန်းကစား။ အဲဒီမှာကစားသမားတိုင်ကြားမှုများများများအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်, တစ်ပတ်ကာလအတွင်းခဲ့ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးတူကိစ္စရပ်များကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုကိစ္စများမဟုတ်တစ်ခုတည်းဂေါက်သီးတန်းတူချိုးဖဲ့သောအတွက်နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကူညီပေးခဲ့သည်။
Retief Goosen ဗိုလ်လုပွဲကျော် 2-လေဖြတ်ခဲနှင့်အတူလှည့်လည်ကြောင်းစတင် Ernie Els နှင့် ဖီးလ် Mickelson နှင့် Goosen Mickelson ကျော် 2-လေဖြတ်အောင်ပွဲနှင့်အတူနေ့ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Els နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ရှိ 80 carded, ဒါပေမယ့် Goosen နှင့် Mickelson နှစ်ဦးစလုံး 1-ကျော်မှတ်တမ်းတင်ထားသော 71 ရမှတ်များ။
Mickelson, Goosen များ၏ရှေ့မှောက်၌တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စုကစားတစ်ဦး 1-လေဖြတ်ခဲယူ 15 နှင့် 16 တွင်း birdied ။ သို့သော် Goosen ကိုလည်းချည်နှောင်ဖို့ 16 birdied, ပြီးတော့ Mickelson 17 ကို double-bogeyed ။ Mickelson ငါးခြေလျင်တန်းတူကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်ခဲ့ပေမယ့်အကွာအဝေးကနေသုံး putted ။
ဒါဟာ Goosen ရဲ့ဒုတိယအမေရိကန်ပွင့်လင်းအောင်ပွဲနှင့် Mickelson ပြေးသမား-Up အဖြစ်ပြီးဆုံးသောတတိယအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2004 ခုနှစ်အမေရိကန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲကနေရလဒ်တွေကို Shinnecock တောင်တန်းများ, နယူးယော့ (က-အပျော်တမ်း) အတွက်တန်းတူ-70 Shinnecock တောင်ကုန်းဂေါက်ကလပ်မှာကစား:
Retief Goosen 70-66-69-71--276 $ 1.125.000
ဖီးလ် Mickelson 68-66-73-71--278 $ 675.000
ဂျက်ဖ် Maggert 68-67-74-72--281 $ 424.604
Shigeki Maruyama 66-68-74-76--284 $ 267.756
သူ Mike Weir 69-70-71-74--284 $ 267.756
Fred သည် Funk 70-66-72-77--285 $ 212.444
ရောဘတ် Allenby 70-72-74-70--286 $ 183.828
စတိဗ် Flesch 68-74-70-74--286 $ 183.828
စတီဖင် Ames 74-66-73-74--287 $ 145.282
ခရစ် DiMarco 71-71-70-75--287 $ 145.282
Ernie Els 70-67-70-80--287 $ 145.282
ဂျေး Haas 66-74-76-71--287 $ 145.282
တိ Clark က 73-70-66-79--288 $ 119.770
တိ Herron 75-66-73-74--288 $ 119.770
တစ်ဦး-Spencer Levin 69-73-71-75--288
အိန်ဂျယ် Cabrera 66-71-77-75--289 $ 109.410
Kendall skip 68-75-74-73--290 $ 98.477
Corey Pavin 67-71-73-79--290 $ 98.477
က Tiger Woods 72-69-73-76--290 $ 98.477
မာကု Calcavecchia 71-71-74-75--291 $ 80.644
ဆာဂျီယို Garcia က 72-68-71-80--291 $ 80.644
ဒါဝိဒ်သည် Toms 73-72-70-76--291 $ 80.644
Kirk က Triplett 71-70-73-77--291 $ 80.644
ဒံယလေသ Chopra က 73-68-76-75--292 $ 63.328
Lee က Janzen 72-70-71-79--292 $ 63.328
တိရော့ 69-75-72-76--292 $ 63.328
နစ်ခ်စျေး 73-70-72-77--292 $ 63.328
Shaun Micheel 71-72-70-80--293 $ 51.774
ဗီဂျေး Singh က 68-70-77-78--293 $ 51.774
ဘင် Curtis 68-75-72-79--294 $ 46.089
KJ Choi 76-68-76-75--295 $ 41.759
Padraig Harrington 73-71-76-75--295 $ 41.759
ပတေရုသ Lonard 71-73-77-74--295 $ 41.759
ဒါဝိဒ်သည် Roesch 68-73-74-80--295 $ 41.759
ဘိုဗန်ရေ 69-73-73-80--295 $ 41.759
ချားလ်စ် Howell III ကို 75-70-68-83--296 $ 36.813
Hidemichi Tanaka 70-74-73-79--296 $ 36.813
Lee က Westwood 73-71-73-79--296 $ 36.813
တစ်ဦး-ဘီလ် Haas 72-73-71-81--297
ဂျယ်ရီကယ်လီ 76-69-71-81--297 $ 30.672
စတီဖင် Leaney 72-70-71-84--297 $ 30.672
Spike McRoy 72-72-72-81--297 $ 30.672
ဂျိုး Ogilvie 70-75-74-78--297 $ 30.672
Pat ဖာရ 73-67-76-81--297 $ 30.672
ဂျက်ဖရီ Sisk 72-72-71-82--297 $ 30.672
Scott Verplank 71-71-72-83--297 $ 30.672
Kris ကော့ 68-74-77-79--298 $ 23.325
ဂျင်မ် Furyk 72-72-75-79--298 $ 23.325
Zach ဂျွန်ဆင် 70-73-75-80--298 $ 23.325
ခရစ် Riley 72-71-72-83--298 $ 23.325
ယောဟနျသ Rollins 76-68-76-78--298 $ 23.325
Dudley ဟတ် 71-73-70-85--299 $ 19.390
Scott Hoch 75-70-73-81--299 $ 19.390
တွမ် Carter က 74-71-70-85--300 $ 18.405
Trevor Immelman 69-70-79-82--300 $ 18.405
Joakim Haeggman 74-69-76-83--302 $ 17.304
တွမ်စွန် 72-71-75-84--302 $ 17.304
Phillip စျေး 70-73-75-84--302 $ 17.304
အဲလက်စ် Cejka 75-70-73-85--303 $ 16.353
Craig Parry 70-73-75-85--303 $ 16.353
ချောက်ထဲ Kresge 72-73-77-82--304 $ 15.888
တစ်ဦး-Chez Reavie 73-72-71-88--304
JJ ဟင်နရီ 75-69-86-76--306 $ 15.630
ကီဗင် Stadler 68-72-82-85--307 $ 15.372
Billy Mayfair 70-70-81-89--310 $ 15.089
နောက်ကျောကိုအမေရိကန်ပွင့်လင်း Winners ၏စာရင်း
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်အများစုကဆက်တိုက်နိုင်ပွဲများ
1998 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: O'Meara ဟာကို Champ မှတစ်ဆင့် PLAYOFF
ဘယ်လိုဂေါက်သီးဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက် Play မှရွေးချယ်ထားသောလဲ?
1936 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: အောင်ပွဲခံဖို့ Shute အဲန်ဂျီအိုများ
1941 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Ghezzi အပို Holes အတွက်နယ်လ်ဆင်ငြင်းဆို
အဆိုပါ LPGA Tour အပေါ်အငယ်ဆုံး Winners
တစ်ဦး Divot ဆိုတာဘာလဲ
မင်းသားရဲ့ထိပ်တန်း 20 အကြီးမြတ်ဆုံး Hits
အဆိုပါ Taoist ယဇ်ပလ္လင်
ဘဏ္ဍာရေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ Key ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများဘာတွေလဲ
Sonoma ပြည်နယ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အလင်း၏အမြန်နှုန်း: ဒါဟာ Ultimate နတ်မင်းကြီးမြန်နှုန်းကန့်သတ်မယ့်!
အဆိုပါထောက်ပံ့ရေး Curve ပြောင်းလဲ
အနုပညာစစ်မှန်သောအလုပ်လုပ် Are ဒါက Hilary ပြတိုက်မျက်နှာ Swap
ဂေါ်ဖီထုပ် Patch ကလေးများ၏သမိုင်း
အာရှ5ဒဏ္ဍာရီ Warrior-အမျိုးသမီးများနေ့
သိပ္ပံပညာရှင် vs အင်ဂျင်နီယာ - ခြားနားချက်ကဘာလဲ?
ရေခဲပြင် Cube Making
GT ကို Mustang GT ကိုအတွက်အဘို့အဘယ်သို့ရပ်ပါသလား?